ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှု အမြန်ဆုံး နိုင်ငံ ၁၃ ခု – Gentleman Magazine
တရုတ်ရဲ့ အလျင်အမြန် စီးပွားရေးကြီးထွားလာမှုဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တွေမှာ ပြောစမှတ်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒိလို အလျင်အမြန် စီးပွားရေး တိုးတက်နေတာဟာ တရုတ်တနိုင်ငံထဲ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အရ ၂၀၁၄ ကနေ ၂၀၁၇ အထိ စီးပွားရေး ကြီးထွားမှုနှုန်း အမြန်ဆုံး နိုင်ငံ ၁၃ ခုကို စာရင်းလုပ်ထားပါတယ်။ စီးပွားရေးကြီးထွားမှုနှုန်း မြန်တာဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး နိုင်ငံတွေမှာ မဖြစ်ပါဘူး။ ပြောရရင် အဲဒိနိုင်ငံတွေဟာ ဝင်ငွေမညီမျှမှု၊ လူဦးရေအရ တစ်ယောက်ခြင်းဝင်ငွေ လျော့နည်းမှု၊ နိုင်ငံရေး မငြိမ်သက်မှု၊ ခြစားမှု တွေကိုတောင် ခံစားနေရတာပါ။
တရုတ်ဟာ ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တာနဲ့ တင်ပို့တာမှာတော့ ဆရာကြီးပါ။ နောက်ဆယ်စုနှစ်မှာ တရုတ်စီးပွားရေးဟာ US ကိုတောင် ကျော်ဖြတ်သွားရမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ စီးပွားရေးပြောင်းလဲလာတာနဲ့ အစိုးရဟာ ပြသနာတွေ ခံစားနေရပါတယ်။ လူတစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေကလဲ ကမ္ဘာ့ပျှမ်းမျှထက် လျော့နည်းနေပါတယ်။
လူဦးရေရဲ့ ၉၀ ရာနှုန်းဟာ လယ်ယာလုပ်ငန်းတွေမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြပြီး ခရီးသွားလာမှု၊ တွင်းထွက်ပစ္စည်း၊ ကော်ဖီ နဲ့ လက်ဖက်ကလဲ Rwanda ရဲ့ စီးပွားရေးထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ၁၉၉၄ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုကနေ ရှေ့ကို တိုးနိုင်ခဲ့ကြပေမယ့် လူဦးရေ ၄၅ ရာနှုန်းဟာ ဆင်းရဲမှုလိုင်းအောက် ရောက်နေတုန်းပါ။
တန်ဇန်းနီးယားဟာ ရွှေထုတ်လုပ်မှုနဲ့ ခရီးသွားလာမှုတို့ကြောင့် စီးပွားရေးတိုးတက်ခဲ့ရတာပါ။ သူ့စီးပွားရေးထဲမှာ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ လယ်ယာ၊ စွမ်းအင်နဲ့ တွင်းထွက်ပစ္စည်း ကိစ္စတွေပါ ပါဝင်ပါတယ်။ လူဦးရေအလိုက် ဝင်ငွေကတော့ ကမ္ဘာ့အနည်းဆုံးထဲမှာ ပါဝင်ဆဲပါ။
Mozambique ဟာ သဘာဝထွက်ကုန် တွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒိတော့ နိုင်ငံစီးပွားရေး တိုးတက်နေဦးမှာ အသေအချာပါ။ ဒါပေမယ့် လူအများစုဟာ လယ်ယာလုပ်ငန်းမှာ လုပ်ကိုင်ကြရပြီး လူဦးရေ တစ်ဝက်ကျော်ဟာ ဆင်းရဲမှုလိုင်းအောက် ရောက်နေဆဲပါ။
ဘူတန်ဆိုတာ ရေအားလျှပ်စစ်၊ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ သစ်တောအပေါ် မှီခိုနေရတဲ့ မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့ နိုင်ငံ သေးသေးလေးပါ။ အိန္ဒိယကို လျှပ်စစ်အများစု တင်ပို့နေတော့ လာမယ့် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ တိုးတက်လာဖို့ လမ်းမြင်ပါတယ်။
အိန္ဒိယ ဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ကြံ့ကြာနေတာတောင် စီးပွားရေးအကဲဖြတ်သမားတွေက အမှတ်ပေးထားဆဲပါ။ ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ လုပ်ငန်းဟာ အိန္ဒိယရဲ့ အဓိက စီးပွားရေး ဖြစ်ပြီးတော့ စီးပွားရေးရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံကို အလုပ်လုပ်သူတွေရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံကနေ ရနေပါတယ်။ ခြစားခြင်း၊ ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနဲ့ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး မလေးစားခြင်းတို့က အိန္ဒိယကို နောက်ပြန်ဆွဲထားပါတယ်။
၇. Papua New Guinea
လူဦးရေရဲ့ ၈၅ ရာနှုန်းဟာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးမှာ လုပ်ကိုင်ကြပြီး ရွှေ၊ ကြေးနီနဲ့ ရေနံလို တွင်းထွက်ပစ္စည်း တင်ပို့တဲ့ လုပ်ငန်းကလဲ နေရာနည်းနည်း ယူထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစိုးရမှာ ပြသနာတွေ အများအပြား တက်နေပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူတွေအတွက် လုံခြုံမှု အားနည်းနေကာ ဖွဲ့စည်းပုံလဲ မတည်ငြိမ် ဖြစ်နေပါတယ်။
၆. Cote d’Ivorie
လူဦးရေရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံဟာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ကိုင်ကြတာပါ။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကိုကိုး ထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငံဖြစ်ပြီး ကော်ဖီနဲ့ စားအုန်းဆီလုပ်ငန်းမှာလဲ နာမည်ကြီးပါတယ်
ဆိုဗီယက် အတိတ်ကနေ ဈေးကွက်စီးပွားရေးအသွင် ပြောင်းလဲနေတဲ့ နိုင်ငံဟာ ဝါဂွမ်းတင်ပို့မှုမှာ ပဉ္စမ အများဆုံးဖြစ်ပြီး သဘာဝဓာတ်ငွေ့နဲ့ ရွှေလဲ ထွက်ပါတယ်။ ဝါဂွမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာ ကလေးအလုပ်သမား လျော့ကျရေးကိုတော့ ဆောင်ရွက်နေဆဲပါ။
အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ မြန်မာဟာ ၂၀၁၁ မှာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဈေးကွက်ထဲရောက်ဖို့ ခြေလှမ်းပြင်ခဲ့ပါတယ်။ လုပ်သားအင်အား များပြားပြီး သဘာဝ သယံဇာတတွေ ရှိတာကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ လူဦးရေအများစုရဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်းကတော့ တိုးတက်မှု မရှိသေးပါဘူး။
၃. Democratic Republic of Congo
ကွန်ဂိုမှာ သယံဇာတ အများအပြား ရှိပြီး အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ခြစားမှုကြောင့် အကျိုးရှိရှိ အသုံးချလို့မရပါဘူး။ စီးပွားရေးကတော့ ပြန်ပြီး နာလန်ထူနေပါပြီ။
Turkmenistan ရဲ့ အရမ်းခြစားနေတဲ့ စီးပွားရေးဟာ ဝါဂွမ်းနဲ့ Gas ပေါ်မှာ မှီခိုနေပါတယ်။ အစက ဆိုဗီယက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့ နံပါတ်လေး ဓာတ်ငွေ့တင်ပို့သူဖြစ်ပြီး လောလောဆယ်တော့ တရုတ်ကိုပဲ အဓိက တင်ပို့နေပါတယ်။ ဥရောပကိုပါ ဖြန့်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက် ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စနစ်မကျတဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ ခြစားမှုတွေဟာ စီးပွားရေးကို နောက်ပြန်ဆွဲထားလျက် ရှိပါတယ်။
အီသီယိုးပီးယားဟာ လယ်ယာလုပ်ငန်း အဓိကလုပ်ကိုင်ပေမယ့် အစိုးရကတော့ ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း၊ အထည်လုပ်ငန်းနဲ့ စွမ်းအင်တို့ကိုပါ စီးပွားရေး တိုးချဲ့နေပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ GDP အတိုးတက်ဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ပေမယ့် လူတစ်ဦးချင်းဝင်ငွေကတော့ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးထဲမှာ ပါဝင်နေတုန်းပါပဲ။
၁၉ ရာစု မီလျံနာတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာ ၂၈ ခု
ကမ္ဘာ့မုဒိမ်းမှုအများဆုံး နိုင်ငံ ၁၀ ခု
ကမ်ဘာ့စီးပှားရေးတိုးတကျမှု အမွနျဆုံး နိုငျငံ ၁၃ ခု
တရုတျရဲ့ အလငျြအမွနျ စီးပှားရေးကွီးထှားလာမှုဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ဆယျစုနှဈတှမှော ပွောစမှတျတဈခု ဖွဈခဲ့ရတာပါ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒိလို အလငျြအမွနျ စီးပှားရေး တိုးတကျနတောဟာ တရုတျတနိုငျငံထဲ မဟုတျပါဘူး။
ကြှနျတျောတို့ဟာ ကမ်ဘာ့ဘဏျရဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြအရ ၂၀၁၄ ကနေ ၂၀၁၇ အထိ စီးပှားရေး ကွီးထှားမှုနှုနျး အမွနျဆုံး နိုငျငံ ၁၃ ခုကို စာရငျးလုပျထားပါတယျ။ စီးပှားရေးကွီးထှားမှုနှုနျး မွနျတာဟာ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျပွီး နိုငျငံတှမှော မဖွဈပါဘူး။ ပွောရရငျ အဲဒိနိုငျငံတှဟော ဝငျငှမေညီမြှမှု၊ လူဦးရအေရ တဈယောကျခွငျးဝငျငှေ လြော့နညျးမှု၊ နိုငျငံရေး မငွိမျသကျမှု၊ ခွစားမှု တှကေိုတောငျ ခံစားနရေတာပါ။
တရုတျဟာ ပစ်စညျးထုတျလုပျတာနဲ့ တငျပို့တာမှာတော့ ဆရာကွီးပါ။ နောကျဆယျစုနှဈမှာ တရုတျစီးပှားရေးဟာ US ကိုတောငျ ကြျောဖွတျသှားရမယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။ စီးပှားရေးပွောငျးလဲလာတာနဲ့ အစိုးရဟာ ပွသနာတှေ ခံစားနရေပါတယျ။ လူတဈဦးခငျြး ဝငျငှကေလဲ ကမ်ဘာ့ပြှမျးမြှထကျ လြော့နညျးနပေါတယျ။
လူဦးရရေဲ့ ၉၀ ရာနှုနျးဟာ လယျယာလုပျငနျးတှမှော အလုပျလုပျကိုငျကွပွီး ခရီးသှားလာမှု၊ တှငျးထှကျပစ်စညျး၊ ကျောဖီ နဲ့ လကျဖကျကလဲ Rwanda ရဲ့ စီးပှားရေးထဲမှာ ပါဝငျပါတယျ။ ၁၉၉၄ လူမြိုးတုံး သတျဖွတျမှုကနေ ရှကေို့ တိုးနိုငျခဲ့ကွပမေယျ့ လူဦးရေ ၄၅ ရာနှုနျးဟာ ဆငျးရဲမှုလိုငျးအောကျ ရောကျနတေုနျးပါ။
တနျဇနျးနီးယားဟာ ရှထေုတျလုပျမှုနဲ့ ခရီးသှားလာမှုတို့ကွောငျ့ စီးပှားရေးတိုးတကျခဲ့ရတာပါ။ သူ့စီးပှားရေးထဲမှာ ဆကျသှယျရေးလုပျငနျး၊ ဘဏျလုပျငနျး၊ လယျယာ၊ စှမျးအငျနဲ့ တှငျးထှကျပစ်စညျး ကိစ်စတှပေါ ပါဝငျပါတယျ။ လူဦးရအေလိုကျ ဝငျငှကေတော့ ကမ်ဘာ့အနညျးဆုံးထဲမှာ ပါဝငျဆဲပါ။
Mozambique ဟာ သဘာဝထှကျကုနျ တှမှော ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုကို ဆှဲဆောငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒိတော့ နိုငျငံစီးပှားရေး တိုးတကျနဦေးမှာ အသအေခြာပါ။ ဒါပမေယျ့ လူအမြားစုဟာ လယျယာလုပျငနျးမှာ လုပျကိုငျကွရပွီး လူဦးရေ တဈဝကျကြျောဟာ ဆငျးရဲမှုလိုငျးအောကျ ရောကျနဆေဲပါ။
ဘူတနျဆိုတာ ရအေားလြှပျစဈ၊ စိုကျပြိုးရေးနဲ့ သဈတောအပျေါ မှီခိုနရေတဲ့ မဖှံ့ဖွိုးသေးတဲ့ နိုငျငံ သေးသေးလေးပါ။ အိန်ဒိယကို လြှပျစဈအမြားစု တငျပို့နတေော့ လာမယျ့ နှဈအနညျးငယျအတှငျးမှာ တိုးတကျလာဖို့ လမျးမွငျပါတယျ။
အိန်ဒိယ ဟာ ပွုပွငျပွောငျးလဲမှုတှေ ကွံ့ကွာနတောတောငျ စီးပှားရေးအကဲဖွတျသမားတှကေ အမှတျပေးထားဆဲပါ။ ဝနျဆောငျမှုပေးတဲ့ လုပျငနျးဟာ အိန်ဒိယရဲ့ အဓိက စီးပှားရေး ဖွဈပွီးတော့ စီးပှားရေးရဲ့ သုံးပုံနှဈပုံကို အလုပျလုပျသူတှရေဲ့ သုံးပုံတဈပုံကနေ ရနပေါတယျ။ ခွစားခွငျး၊ ခေါငျးပုံဖွတျခွငျးနဲ့ အမြိုးသမီး အခှငျ့အရေး မလေးစားခွငျးတို့က အိန်ဒိယကို နောကျပွနျဆှဲထားပါတယျ။
လူဦးရရေဲ့ ၈၅ ရာနှုနျးဟာ လယျယာစိုကျပြိုးရေးမှာ လုပျကိုငျကွပွီး ရှေ၊ ကွေးနီနဲ့ ရနေံလို တှငျးထှကျပစ်စညျး တငျပို့တဲ့ လုပျငနျးကလဲ နရောနညျးနညျး ယူထားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အစိုးရမှာ ပွသနာတှေ အမြားအပွား တကျနပွေီး ရငျးနှီးမွှုပျနှံလိုသူတှအေတှကျ လုံခွုံမှု အားနညျးနကော ဖှဲ့စညျးပုံလဲ မတညျငွိမျ ဖွဈနပေါတယျ။
လူဦးရရေဲ့ သုံးပုံနှဈပုံဟာ လယျယာစိုကျပြိုးရေး လုပျကိုငျကွတာပါ။ ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး ကိုကိုး ထုတျလုပျတဲ့ လုပျငံဖွဈပွီး ကျောဖီနဲ့ စားအုနျးဆီလုပျငနျးမှာလဲ နာမညျကွီးပါတယျ။
ဆိုဗီယကျ အတိတျကနေ ဈေးကှကျစီးပှားရေးအသှငျ ပွောငျးလဲနတေဲ့ နိုငျငံဟာ ဝါဂှမျးတငျပို့မှုမှာ ပဉ်စမ အမြားဆုံးဖွဈပွီး သဘာဝဓာတျငှနေဲ့ ရှလေဲ ထှကျပါတယျ။ ဝါဂှမျးလုပျငနျးတှမှော ကလေးအလုပျသမား လြော့ကရြေးကိုတော့ ဆောငျရှကျနဆေဲပါ။
အရှတေ့ောငျအာရှရဲ့ အဆငျးရဲဆုံးနိုငျငံ တဈနိုငျငံဖွဈတဲ့ မွနျမာဟာ ၂၀၁၁ မှာ ကမ်ဘာ့စီးပှားရေးဈေးကှကျထဲရောကျဖို့ ခွလှေမျးပွငျခဲ့ပါတယျ။ လုပျသားအငျအား မြားပွားပွီး သဘာဝ သယံဇာတတှေ ရှိတာကွောငျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုတှကေို ဆှဲဆောငျနိုငျပါတယျ။ လူဦးရအေမြားစုရဲ့ လူနမှေုအဆငျ့အတနျးကတော့ တိုးတကျမှု မရှိသေးပါဘူး။
ကှနျဂိုမှာ သယံဇာတ အမြားအပွား ရှိပွီး အုပျခြုပျရေးစနဈ ခွစားမှုကွောငျ့ အကြိုးရှိရှိ အသုံးခလြို့မရပါဘူး။ စီးပှားရေးကတော့ ပွနျပွီး နာလနျထူနပေါပွီ။
Turkmenistan ရဲ့ အရမျးခွစားနတေဲ့ စီးပှားရေးဟာ ဝါဂှမျးနဲ့ Gas ပျေါမှာ မှီခိုနပေါတယျ။ အစက ဆိုဗီယကျဖွဈခဲ့တဲ့ နိုငျငံဟာ ကမ်ဘာ့ နံပါတျလေး ဓာတျငှတေ့ငျပို့သူဖွဈပွီး လောလောဆယျတော့ တရုတျကိုပဲ အဓိက တငျပို့နပေါတယျ။ ဥရောပကိုပါ ဖွနျ့ဖို့ ရညျရှယျခကျြ ရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ စနဈမကတြဲ့ နိုငျငံရေးနဲ့ ခွစားမှုတှဟော စီးပှားရေးကို နောကျပွနျဆှဲထားလကျြ ရှိပါတယျ။
အီသီယိုးပီးယားဟာ လယျယာလုပျငနျး အဓိကလုပျကိုငျပမေယျ့ အစိုးရကတော့ ထုတျကုနျလုပျငနျး၊ အထညျလုပျငနျးနဲ့ စှမျးအငျတို့ကိုပါ စီးပှားရေး တိုးခြဲ့နပေါတယျ။ ကမ်ဘာ့ GDP အတိုးတကျဆုံး နိုငျငံဖွဈပမေယျ့ လူတဈဦးခငျြးဝငျငှကေတော့ ကမ်ဘာ့အဆငျးရဲဆုံးထဲမှာ ပါဝငျနတေုနျးပါပဲ။
၁၉ ရာစု မီလြံနာတဈယောကျရဲ့ ဘဝသငျခနျးစာ ၂၈ ခု
ကမ်ဘာ့မုဒိမျးမှုအမြားဆုံး နိုငျငံ ၁၀ ခု
Previous: ချုံကြားမှ ဘုံဖျားသို့ တက်လှမ်းလာခဲ့သူ Ralph Lauren
Next: ယောက်ျားများ ရှောင်သင့်တဲ့ လိင်ကိစ္စအမှား ၁၀ ခု (18+)